Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Mitohy ny famotehana ny mpandraharaha eto e !
Inty sy Nday: Mitohy ny famotehana ny mpandraharaha eto e !
Notaterin’ny gazety namana ny sabotsy teo fa misy amin’ireo mpandraharaha ara-toekarena mpiantoka asa tolotra (préstataire de service) izay nifanaraka tamin’ny fitondram-panjakana fa hiantoka raharaha sy asa hoenti-miatrika ny fandraisana ny fivoriana an-tampon’ny tany mampiasa ny teny frantsay (Sommet de la francophonie) tamin’ny 2016 no tsy mbola nisitraka ny tambin’ny asa vitany tamin’izany. Raha tsiahivina dia nirehaka ny fitondram-panjakana Hvm teo ampanomanana an’io fivoriana an-tampony io fa mahatratra 6.000 tapitrisa ariary (6miliara ariary) no teti-bola hoenti-manana an’io fivoriana io, ary efa ampelan-tanana avokoa.
Mahagaga anefa fa efa hiditra amin’ny faharoa-taonany io raharaha io, ary raha tsy diso ny fahatsiarovana dia nirehareha ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa tsy nitsanga-menatra tamin’iny fivoriana iny satria tontosa an-tsakany sy an-davany ny fikarakarana sy ny fanomanana tamin’ny ankapobeny. Tsy nilatsaka avy any an-danitra toy ny avandra na nitrebona ho azy avy ao ambanin’ny tany tao anefa ny fahatontosan’iny fivoriana iny fa nisy niantoka azy ny raharaha rehetra. Ka nahoana tokoa re no misy mpandraharaha nifanarahan’ny fanjakana Malagasy fa isan’ny manatanteraka ny asa no tsy mba naloa taminy hatramin’izao ny sandan’ny asa vita sy nifanarahana taminy ?
Raha ny re koa anefa dia hoe nisy tamin’ireo mpandraharaha niantoka asa sy nanao raharaha tamin’iny fivoriana iny no efa naharay manontolo ny saran’ny asa nataony, satria hoe “mpandraharaha mpahazo avara-patana sy mpiaka-dapa noho izy ireny naman’ny mpitondra (Hvm???°), fa ny tsy mpahazo avara-patana sy tsy mpiaka-dapa, dia nodian’ny mpitondra tsy fantatra”. Misy mizana tsindriana ila sy manao tany avo avaratra izany e !
Nahoana no misy fanavahana? Ary maninona koa no tsy mbola efaina ny zon’ny hafa fa ihainohainoana fotsiny ao? Sa sanatriavin’ny vava “efa nadio ny rano nitana”, izany hoe efa lasan-dry zalahy “tsy maty manota” ny anjara volan’ireny mpandraharaha ara-toekarena niezaka niaro ny voninahi-pirenena tamin’iny fivoriana an-tampon’ny frankôfônia iny ?
Sao mba tsy rariny, rey olona ô! Mba mipetraha ianareo mpitondra fanjakana eo amin’ny toeran’ireny mpandraharaha ireny fa efa nikatso tao nandritra ny roa taona ange izany ny volany nefa dia tsy mba aloan’ny tompon’andraikitra ny zon’izy ireny e! Dia raha akarina fitsarana izao izany raharaha izany ka hitaky onitra ambonin’ny zony ireo mpandraharaha, satria nisy faty antok’izy ireo nandritra ny elanelam-potoana tsy naharaisany ny vola tambin’ny asa nataony, dia hisy indray ny hilaza hoe “nahitahita ireny matoa nahazo tolotr’asa tamin’ireny”. Asa rey vahoaka fa misy famonoan-tsofina mibaribary ataon’ny mpitondra fanjakana mihitsy eto an !
Izahay manokana anefa, raha mandinika sy manara-maso ny fivoaran’ny toe-draharaham-panjakana ankapobeny hatrizay teto dia tsy gaga raha miseho izany endri-javatra izany. Tsy gaga izahay fa ny fahavitan’ny fanjakana nanefa ara-potoana, an-tsakany sy andavany, ny volan’olona niantoka asa toa izany aminay no tokony hahagaga, na vola efa vonona tao io na vola mbola tokony niandrasana fanampiana avy any ivelany.
Ny mpitondra fanjakana rehetra nifandimby teto dia manana fahaizana manokana amin’io tsy fanajana ny zon’olombelona io, ary singa iray ao anatin’ny vala famaritana ny fanajana ny zon’olombelona ny fanefana ny tambin-jon’ny olona nahavita asa nateraky ny fifanarahana tamin’ny fanjakana toa itony raharaha iray itony.